Inona no atao boribory vy - China Foshan Hermes Steel
Inona no atao borosy vy
Ny fizotran'ny sary tariby dia hahavery ny hatevin'ny takelaka vy tsy voafetra amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny 0.1 ~ 0.2mm. Ankoatr'izay, satria ny vatan'olombelona, ​​indrindra ny palma, dia manana menaka sy hatsembohana somary matanjaka, ny tabilao misy tariby tsy misy fangarony dia matetika mamela dian-tànana miharihary rehefa voakasiky ny tanana, ary mila kosehina matetika.
Ny sary an-tariby vita amin'ny vy dia matetika misy vokany betsaka: lamina tariby mahitsy, lamina oram-panala, lamina nylon. Ny lamin'ny kofehy mahitsy dia lamina tsy misy fanelingelenana avy any ambony ka hatrany ambany, ary amin'ny ankapobeny dia ampy ny mampiasa milina fanaovana sary raikitra hamindra ilay zavatra miasa mandroso sy miverina. Ny firafitry ny lanezy no be mpitia indrindra ankehitriny. Izy io dia misy teboka kely milamina, ary azo ampiasaina amin'ny takelaka bibikely hahatratrarana ny vokany.
Ny lamina nylon dia misy tsipika misy halava samy hafa. Satria malefaka ny volony nylon, dia afaka mivezivezy ny faritra tsy mitovy hanatrarana ny lamina nylon.
Ny tabilao fanaovana tariby dia matetika milaza ny firafitry ny tany miampy ny anarana iombonana. Ny anarana teo aloha dia ny frosted board, ary ny firafitra ambonin'izany dia misy tsipika mahitsy, tsipika tsy mitongilana (sy tsipika), ravina ary kofehy. Ny tabilao fanaovana tariby vita amin'ny vy tsy misy loko dia ny lokon'ny loko isan-karazany azo avy amin'ny fametahana rano simika na fanodinana volo fanosotra volo amin'ny vatan'ny tabilaon'ny tariby vy.
1. Ny banga ny singa rehetra dia tokony ho marina, ary ny fiviliana avela ny halavan'ny singa dia 1mm.
2. Ireo singa dia tsy maintsy zahana raha mahitsy alohan'ny hikapa azy, raha tsy izany dia tsy maintsy ahitsy.
3. Mandritra ny famafana, ny electrode na tariby dia tokony ho karazana mety amin'ny fitaovana hamboarina, ary tokony omena ny taratasy fanamarinana ny ozinina.
4. Ny singa dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana marina mandritra ny welding.
5. Mandritra ny fantsom-bozaka dia tokony ho mafy orina ny tonon-taolana eo anelanelan'ireo singa, tokony ho feno ny lasitra, ary tokony hitovy ny onjan'ny fantsom-panafody eo ambonin'ny fantsom-panafody, ary tsy tokony hisy lalantsara ambanin-javatra, vy tsy feno, triatra, solofy, las dona, vodin-doha, gorodona arofanina, lesoka toy ny vava volkano sy ny mason-koditra toy ny fanjaitra, ary tsy maintsy misy spatter amin'ny faritra welding.
6. Rehefa vita ny fantsom-bozaka dia tokony hatsipy avy eo ny slag welding.
7. Aorian'ny fangejana sy fametahana ireo singa, dia tokony hasiana savony sy hosorana milina tanana izy ireo mba hahatonga ny fisehoana ho madio sy hadio.